Dowlada Norwey oo bilaabaysa inay sharciyada kala noqoto soomaalida aan degenaanshaha qaadan. - iftineducation.com
iftineducation.com – Kowdii bishan aan ku guda jirno ee April sanadkan 2016 ayaa wasiirada arimaha soo galootiga wadanka Norwey naagta lagu magaacabo Sylvi Listhaug soo rogtay go aan cusub oo ah in dadka qaxootiga ah ee magangalyada ku joogo Norwey lagala noqon karo sharciga dal-kujooga, dibna loogu celin karo wadankii ay ka yimaadeen. Hadii ay nabad ka dhalato wadankii ay ka yimaadeen, meeshana ay ka baxdo baahidii qofka ku qasabtay inuu wadankiisi uu kasoo qaxo marii hore. Sidoo kale waxay sheegtay inay dowlada Norwey ay rabto in dadkan ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo nabad kusoo dabaalida wadankii ay ka yimaadeen. Go aankan cusub ayaa daba socdo heshiis ay xisbiyada Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp iyo Venstre ay galeen 19. november 2015, kuna saabsanaa xiisada ka dhalatay qoxootiga kusoo fatahay yurub sanadkii 2015.
Daawo Sawirada: Gaadiidkii weerarka loo adeegsan rabay ee lagu fashiliyay Magaalada Muqdisho..